IIKHIKHINI EZINGAMA-50 EZIPHEZULU EZIMNYAMA EZIPHEZULU (IIFOTO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhikhini ezingama-50 eziPhezulu eziMnyama eziPhezulu (Iifoto)
Iikhikhini ezingama-50 eziPhezulu eziMnyama eziPhezulu (Iifoto)
Le galari yingqokelela yeekhitshi ezingama-37 eziphezulu zemithi emnyama-uninzi loyilo olubanzi, kunye neendlela ezivulekileyo. Ezi khitshi zineentlobo ngeentlobo zezitayile ezivela kule mihla, ukuya kwezangoku kunye nezesiko. Ezi zoyilo zasekhitshini zivulekileyo zibonelela ngeekhabhathi ezimnyama zomthi ezinezinto ezikhethiweyo ukuba zitshatise. Imifanekiso iqaqambisa iindlela zokubandakanya iikhabhathi zomthi ezimnyama kunye nomgangatho kunye neetafile ukwenza imvakalelo yokunethezeka, kunye nobushushu. Umthi omnyama wekhitshi lekhabhathi xa udityaniswe neplanethi yokukhanya yegranite okanye i-backsplash inokuma ngokwenyani kwaye yenze umbono. Apha ngezantsi uyakufumana iikhikhini ezintle zemithi emnyama ezivela kubaqulunqi bangaphakathi abaphezulu kunye nabakhi bamakhaya.
Ikhitshi eboniswe kumfanekiso ongentla inikezela ngesimemo sokutya esidlela ukutya esilungele ukonwabisa kunye nokuchitha ixesha nabahlobo kunye nosapho. Ikhabhathi emnyama etyebileyo yenziwe ngokwesiko kwaye yenziwe ngombala okhanyayo wegranite. Isiqithi esikhulu sekhitshi elixande sakhiwe kwisinki kunye noyilo olukhulu lokulungiselela ukutya kunye nokufikelela okulula kwisitovu sokutshisa se-6.
Iikhitshi kule mihla ziza ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto kunye nokugqitywa okukhoyo kwintengiso. Ngenxa yoluhlu olubanzi lwezitayile kunye nokugqitywa kokukhetha, umntu unokufumana ukudideka ngokulula njengokukhetha, kwaye isigqibo ngokuqinisekileyo siya kubila phantsi kukhetho lokukhetha kunye nenkangeleko oyifunayo.
Abanye abantu bakhetha imibala ecacileyo, eqinileyo ekhitshini labo, abanye abanye bakhetha ukufudumala ukuziva ukugqitywa kweenkuni zendalo bayakwazi ukunika. Ukugqitywa kombala oqinileyo kunika ukucoceka, ukujonga okwangoku, ngelixa ukugqitywa kweenkuni kunika imvakalelo yendalo ekhitshini. Ukuba uthatha isigqibo ngokukhetha ukugqitywa kweenkuni ekhitshini lakho, kuya kufuneka ukhethe kwiindidi ezahlukeneyo zemibala yeenkuni kunye nokugqitywa, okunokubothusa kakhulu abanye, njengoko ukugqitywa kweenkuni kukwahluka, ngeendlela ezahlukeneyo zephantsi kunye neepateni zokutya . Ukujonga okwangoku, abantu bahlala betyekela kwiithoni zomthi ezikhanyayo ezinje ngemephu okanye i-beech, kodwa ukuziva unomdla ngakumbi, ukugqitywa kweenkuni ezimnyama kuya kuba lolona khetho lubalaseleyo.
Ukugqitywa kwamaplanga amnyama ekhitshini lakho kuthanda ukukunika ukujonga okuthe kratya, okungaqondakaliyo. Ikhupha umbono wobunewunewu kunye nobuhle, njengoko ukugqitywa kweenkuni ezimnyama kwakudla ngokusetyenziswa kwizakhiwo zangaphakathi kunye nefenitshala, ngakumbi kwifanitshala yexesha le-baroque, kunye nefenitshala yobudala bamaxesha aphakathi. Kananjalo, ukusebenzisa ukugqitywa komthi omnyama ekhitshini lakho kunika i-classic vibe kunye nesibheno esingapheliyo. Abanye abantu bahlala besoyikiswa kukusebenzisa iinkuni ezimnyama ezigqityiweyo ekhitshini labo njengoko besiva ngathi kunokusinda kakhulu okanye kudala. Nangona kunjalo, ngokudityaniswa okufanelekileyo kokugqitywa, ukukhanya kwendalo kunye nokufakelwa, kunye nolwakhiwo, uya kuba nakho ukufikelela kwiindidi ezahlukeneyo kunye nezitayile usebenzisa ukugqitywa komthi omnyama.
Iikhabhathi zeWood Wood
Imibala yeKhitshi yepeyinti eneeKhabhathi eziMnyama
Iikimu zemibala yeeKhitshi ezineeKhabhathi eziMnyama
Nguwuphi uMgangatho woMgangatho ohamba kunye neeKhabhinethi eziMnyama zeKhitshi
Iikhabhathi eziMnyama zeKhitshi ezinemigangatho yokuKhanya kweNkuni
Iingcamango zeKhitshi zeBacksplash zeeKhabhinethi eziMnyama
Imibala yeTafile yeeKhabhathi eziMnyama zeKhitshi
Ukufumana ukubukeka okunotyebileyo kweekhabinethi zomthi omnyama ezininzi iintlobo ezahlukeneyo zemithi zingasetyenziswa. Ngokuqhelekileyo umthi onzima ucoce umbala owunqwenelayo kwaye ufumaneke ukuba uthengwe, okanye unokukhangela umenzi wekhabhathi yesiko ukuze ufumane owona mbala uwufunayo.
Uhlobo lomthi olusetyenziselwa iikhabhathi zeenkuni ezimnyama lunokuxhomekeka kwinto ekhoyo kwindawo yakho. Iinkuni ezidumileyo zokwenza ikhabinethi etyebileyo emnyama yimephu enzima, i-oki, i-cherry, i-mahogany, i-bamboo, i-birch okanye i-walnut. Njengexabiso lokonga umlinganiso obhityileyo womthi onzima obekwe ngaphezulu komhlaba ongaphantsi ngeplywood okanye ezinye izinto ezingabizi kakhulu zihlala zisetyenziswa.
Xa usebenzisa iikhabhathi ezimnyama kubalulekile ukujonga ngononophelo ukukhanya. Iifestile ezinkulu ziya kunceda ukukhanya kwendalo ukugcina ikhitshi lakho lingabonakali limnyama kakhulu. Ukuhlawula ukukhanya kakuhle ngaphakathi kubalulekile. amagumbi aneekhabhathi ezimnyama kunye nophahla olude luya kubiza ezinye izinto zokukhanya. Ukufaka imiphezulu yeetafile zombala okhanyayo kunye nokubuyela umva okubonisa ukukhanya kuya kunceda ikhitshi lakho elimnyama kwikhabhathi ukuba uzive umnyama kakhulu.
Xa uyila ikhitshi lakho uya kufuna ukuqinisekisa ukuba zonke izinto zihamba ngokudibeneyo ngokudibeneyo. Ukuba wenza i-remodel fumana iisampulu zazo zonke izinto kunye ukuqinisekisa ukuba ziyadibana. Ukukhetha ii-countertops zakho kuqala kwenziwa rhoqo ngenxa yelitye lendalo elihlala lisahluka ngombala kunye nephethini. Emva kokukhetha i-countertop unokuba nexesha elilula lokufanisa amabala enkuni, imibala yepeyinti, i-hardware kunye nezinye izinto ezigqityiweyo.
I-avareji yeendleko zeringi yokuzibandakanya
Umbala omdaka othambileyo osetyenziselwa ukucola iikhabhathi zasekhitshini unika eli khitshi isibheno esamkelekileyo, njengoko umthunzi osetyenzisiweyo ukhumbuza kakhulu iitshokholethi zobisi. Itafile yegranite esetyenziswe kulo lonke ikhitshi ikwangumdlalo ogqibeleleyo kuba ngelixa linombala ophantsi omfusa, umbala ocociweyo ohlanjiweyo uyafana kakhulu nebala kwiikhabhathi ezisisiseko. Ukukhanya kwendalo, imigangatho yokukhanya okukhanyayo kunye nokukhanya kwe-cream mosaic backsplash kulinganisa umthi omnyama osetyenzisiweyo kwiikhabhathi zasekhitshini, okwenza indawo yekhitshi ibonakale ikhanya nangona isebenzisa iinkuni ezimnyama.
Ngokubanzi, imibala emininzi yepeyinti isebenza kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama. Ngokukodwa ukuba izinto zakho eziphambili zingumthi oqinileyo, zombini iziphelo zombala zinokusetyenziselwa ukuxhasa okanye ukuthelekisa ukubonakala kweekhabhathi zekhitshi ezimnyama.
Ukukhetha umbala wepeyinti ofanelekileyo ekhitshini kunokudideka xa sele kubonisiwe kuluhlu olubanzi lokukhetha. Ipeyinti iza ngemibala engapheliyo kunye nombala, kwaye nganye nganye ivelisa iziphumo ezahlukeneyo kwinkangeleko yekhitshi ngokubanzi. Nangona kunjalo, kukho inani leengcebiso eziphambili onokuzisebenzisa njengesikhokelo ekukhetheni umbala wepeyinti ofanelekileyo kunye neekhabhathi zakho zomthi ezimnyama.
Khetha ukuba uyafuna ukudibanisa okanye ukwahlula. Ukukhanya kunye nemibala yepeyinti emnyama inokuphucula ukubukeka okunethezeka kweekhabhathi zamaplanga okanye ithoni phantsi kobutyebi bayo. Konke kuxhomekeke kwimpembelelo ofuna ukuyiphumeza kunye neyona nto iphambili kubuhle obufuna ukugqama, nokuba kungangqinelana okanye kwahluke. Eli lihlala linyathelo lokuqala lokukhetha umbala wepeyinti ofanelekileyo kwiindonga zakho kunye nokwenza umbala wombala ofanelekileyo ekhitshini lakho.
Sebenzisa amagama angaphantsi komthi njengesikhokelo sombala. Kwiikhabhathi ezimnyama ezenziwe ngomthi, ungasebenzisa amagama aphantsi ombala ombala okanye umbala wendalo wezinto ezinje ngokuhambelana. Umthi awunakuze ube ngumbala omnye oqinileyo njengombala omnyama, tan okanye espresso. Ngokwesiqhelo inombala osisiseko kwaye inokuqatshelwa yakuba ihlolwe ngokusondeleyo. Umthi omnyama onee-undertones ezishushu zihlala zihlala zinombala otyheli, iithoni ezibomvu okanye iorenji tinge, ngelixa ezo zinendawo ephantsi enezithunzi zingwevu ngomphezulu wazo. Khetha imibala yepeyinti enobushushu obufanayo bombala.
Unokuncamathela kwimigaqo embalwa yengqondo yengqondo esisiseko. Imibala yaziwa ngokusiphembelela ngeendlela ezininzi-ukusuka kwiimoods, isimilo, iimvakalelo. Izifundo zide zibonise ukuba nendlela esikubona ngayo ukutya ichaphazeleka yimibala esiyisebenzisa ekhitshini. Eminye imibala ibonwa ukuba ayilungelanga iikhitshi ngenxa yokuba ingavuseleli umdla wakho wokutya okanye ikhuthaze indlala.
Imibala epholileyo efana neblues, imifuno kunye nemfusa zibonwa njengezinto zokuthintela ukutya ngenxa yempembelelo yazo, ngelixa ukukhanya okuqaqambileyo okubomvu kwaziwa ngokurhwebesha umntu. Umthunzi ofudumeleyo obomvu wenza ukuba amakhitshi abonakale ephila, ngakumbi ukuba ilawulwa ngumbala omnyama obumnyama. Ukuba ufuna ukusebenzisa le ndlela ekukhetheni umbala waseludongeni oza kuhamba nekhabhathi yakho emnyama yasekhitshini, khetha iinguqu ezigcweleyo ezibomvu njengoko ungenzi igumbi lakho lothuse kakhulu okanye lingoyiki.
Gcina ukhumbula ukuba akukho mithetho ingqongqo yokukhetha umbala wekhitshi olungileyo-zizikhokelo zokukunceda uphelise uqikelelo. Imibala yekhitshi inokukhethwa ngokokhetho lomntu kunye nembonakalo ojolise ukuyiphumeza ekhayeni lakho.
Nalu ukhetho lwepeyinti onokulujonga ekhitshini ngeekhabhathi ezimnyama:
Yenza umahluko nge-beige's kunye nomhlophe -Ngaphandle kokumnyama nomhlophe, mhlophe kunye nomdaka yenye nenye indlela yokubambisa yeklasikhi yesicelo sangaphakathi nangaphandle. Ukungathathi hlangothi komhlophe kubonelela ngokungafaniyo neenkuni ezinzulu. Kwakhona, xa zidityaniswe neekhabhathi zomthi ezimnyama, udonga olumhlophe lunokunyusa amandla aphantsi okhuni, lubonakale luqaqambile.
Iikhabhathi zekhitshi ezinemibala emnyama kunye neendonga ezimhlophe eziqaqambileyo nazo zixhaphakile kuseto lwekhitshi lwanamhlanje. Ngapha koko, ithathwa njengodibaniso lokusilela kombala wokudibanisa izindlu zangoku kunye nezamhlanje. Umbala omhlophe omhlophe odityaniswe nobutyebi bemithi emnyama yenza ukubukeka okuqaqambileyo okudityaniswe nekhabhathi ecwangcisiweyo, iziqwenga zefanitshala ezibukhali, imiphezulu yeetafile zegranite, izixhobo zentsimbi ezinyibilikisiweyo kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici. Umdibaniso wemibala yeklasi ikwabonelela ngethuba elifanelekileyo lokwazisa iipopu zemibala ngaphakathi. Ukuba ufuna ukwenza lo mdibaniso wombala ubenomdla ngakumbi, yongeza omnye umbala ocacileyo ngezixhobo zakho, izixhobo zokukhanyisa, iimpahla ezithambileyo okanye ifenitshala.
I-Beige, kwelinye icala, yenye yeendlela ezimhlophe. Abanye babanini bamakhaya banokufumana umhlophe kancinci okanye ubonakala buthuntu. Xa kuthelekiswa nombala oqaqambileyo, omhlophe omhlophe, i-beige yayinethoni e-creamy ngakumbi kwaye ine-tinge etyheli kancinci. Lo mbala utyheli wenza ibhalansi elungileyo ye-hue epholileyo kunye nesandi esiphantsi esifudumeleyo. I-Beige isebenza kakuhle kunye neekhabhathi ezimnyama njengoko idala umphumo ofanayo omhlophe ngelixa ushiya umoya opholileyo kunye nowokumema kwindawo. Iindonga ze-Beige kunye neekhabhathi ezimnyama nazo zikulungele ngokufanelekileyo amakhaya emveli kunye nelizwe ngakumbi xa zidityaniswe ngombala omangalisayo okhanyayo wecomputer yamatye.
Iindonga zeBegi kunye ezimhlophe zisebenza njengebhanti engenanto ekuvumela ukuba wenze nasiphi na isikimu sombala ngokuxhomekeke kukhetho lwakho kunye nokhetho lwakho. Ukuxuba kunye nokudibanisa izixhobo, ukugqiba kunye nezinye izinto zokwenza izinto zombane, imiphezulu yeetafile, ukutyibilika, izixhobo zekhompyutha kunye nokulungiswa kulula kuba ujongene nemibala emibini engathathi hlangothi ephambili kwiphalethi yakho.
Udonga lwe-beige okanye olumhlophe alukhuphisani nobutyebi beekhabhathi zomthi ezimnyama. Ke ukuba ufuna ukwenza ikhabethe lakho kunye nomsebenzi wemingxunya eyona ndawo kugxilwe kuyo ekhitshini, le yenye yemibala onokuyihlola. Kwakhona, ukuba ujongana nendawo encinci ekhitshini lakho, oku ngumbala wepeyinti ogqibeleleyo. I-White, beige kunye neminye imibala ekhanyayo ithanda ukudala inkohliso eyenza ukuba amagumbi abonakale emakhulu kwaye ebanzi. Ukuba sele unayo ikhitshi elincinci elineekhabhathi ezimnyama ukwazisa udonga olumhlophe okanye lwe-beige olunombala kuya kukunceda wenze isithuba singabi nzima emehlweni.
Ngaphandle komhlophe kunye ne-beige, kukwakho nezinye i-shades ezosapho ngombala ofanayo onokuhamba kakuhle kwiikhabhathi ezimnyama. Oku kubandakanya iintyatyambo ezimhlophe, ezimhlophe, i-ecru, iperile, ialabhasta, iimpondo zendlovu, ikhephu, umoya omhlophe, ulwandle olumhlophe, iqabaka elimhlophe kunye nekhrim. Uninzi lwebranti yepeyinti inikezela ukhetho olungapheliyo xa kuziwa kumbala omhlophe.
Ukuphucula ngeGrey -Grey ngomnye umbala ongathathi hlangothi olungele iikhabhathi ezimnyama. Iqwalaselwa njengeyona ndlela intsha imhlophe yabayili abaninzi kunye nabanini bamakhaya. Kulabo bafumanisa ukuba mhlophe buthuntu okanye kuyadika, grey epholileyo yeyona nto ifanelekileyo. Ngwevu iza ngee-shades ezahlukileyo, zombini zikhanya kwaye zimnyama kwaye zinokudityaniswa ngemibala eyahlukeneyo. Umbala olungileyo wesiseko weekhitshi esenza ukudibanisa kunye nokuhambelana kwezinto kulula.
Umbala grey ukwaziwa ngokuboleka amandla okuzola kwizithuba. Ngomthunzi ofanelekileyo, idala umphumo omangalisayo-omnye othobekileyo kwaye ongoyikiyo. Xa ubhangqiwe kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama, grey inokudala umahluko okanye ukuvumelana. Igrey epholileyo ivelisa umahluko ophantsi owongeza ubunzulu kunye nobukhulu kwisithuba, ngelixa i-grey efudumeleyo idibanisa kakuhle ngomthi ocebileyo omnyama. Esinye isiphumo sokuba iindonga ezingwevu zekrete kukuba ziyaziphucula iindlela eziphantsi kwendalo zekhabhathi yomthi omnyama.
Nangona ithandwa ngakumbi kuseto lwangoku lwekhitshi, indibaniselwano yeendonga ezingwevu kunye nekhabhathi yemithi emnyama nayo inokusetyenziselwa iikhitshi zemveli, zenguqu nezangoku.
Gcwalisa ngee-shades ezimdaka -Ukuncamathela kumthunzi omnye wombala wekhitshi lakho kuvelisa ukujonga okupheleleyo okuboshwe ngokudibeneyo. Nangona kunjalo, ukunamathela kumbala omnye akuthethi ukuba kuya kufuneka uphinde umthunzi ofanayo ngokugqithileyo kuko konke ukugqitywa ekhitshini lakho. Unokuthatha umbala omnye kwaye uhlengahlengise kwi-lint tint, ithoni mellow okanye umnyama omnyama ukuvelisa ulungelelwaniso lombala olungeleleneyo. Ukwenza ubungakanani kunye neskimu sombala we-monochromatic ebonakalayo, ubukhulu bembala obufanelekileyo kufuneka bukhethwe ngononophelo kwaye busetyenziswe ezindongeni, emgangathweni, kwi-splashboard nakwizixhobo. Lo mahluko kunye nokwahluka kukwenza ukuba ukujonga ngokubanzi kungacacanga kwaye kuthintele indawo ekujongeni kakhulu.
Imibala emdaka, enje ngesanti, i-tan okanye i-mocha ekhanyayo ilungile ukuba ufuna ukuhamba ngeskimu sombala we-monochromatic. Iimpawu zobumdaka ziyahambelana nombala weplanga ngelixa usongeza kwindalo yawo. Ukudityaniswa kweendonga ezimdaka ngebala kunye neekhabhathi zomthi ezimnyama kuvelisa umoya ofana nowasekhaya kunye nemvakalelo yokumema.
Ukuba iikhabhathi zakho sele zimnyama, qiniseka ukuba ufumana umthunzi ofanelekileyo omdaka kwiindonga zakho. Sukuhamba nomthunzi omnyama kakhulu kuba uya kufihla iikhabhathi zakho kuphela. Yinto yokugqibela ofuna ukuyenza ngakumbi ukuba iinkuni zakho zityebile ngokwendalo kwaye ziqhayisa ngobuhle bokwenyani. Iikhabhathi zekhitshi zomthi oqinileyo ezimnyama zinobuhle obahlukileyo obufanele ukuboniswa.
Uyilo lwesiko olufana nekhitshi lelizwe, khetha iinguqulelo ezikhaphukhaphu ezimdaka okanye zegolide. Kodwa gcinani engqondweni ukuba ikulungele ngakumbi kwiikhikhini ezinkulu kunye neendlela ezivulekileyo.
Yiya kwi-ultra-rich with tones deep -Iitoni ezinzulu nezityebileyo zilungele iikhabhathi zomthi ezimnyama ukuba ufuna umbala wombala osesikweni, ococekileyo kwaye onobuhle. Banika isandi sombala esingothusiyo kwaye esingaphambuki kuhlobo lwendawo. Ukongeza koku, ukudityaniswa kweethoni ezinzulu kunye neenkuni ezimnyama kunika iikhitshi uluvo olucebileyo nolunobunewunewu. Ke ukuba ufuna ukwenza umdlalo weqonga, olu lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Oku kusebenza kumakhitshi ajolise ngakumbi kwinkangeleko yemveli njengezindlu zembali, izindlu ezindala zehlabathi okanye Iikhikhini zelizwe . iplamu, iti, moss eluhlaza kunye newayini ebomvu.
Xa udibanisa iikhabhathi ezimnyama ezinemibala yepeyinti enzulu kwaye etyebileyo, yiya kubunzulu obufanelekileyo ukuthintela ikhitshi lakho ekubeni likhangeleke lisoyikeka okanye libe nzima. Oku kufanelekile ngakumbi kwiikhitshi ezinkulu kuba zinotyekelo lokwenza iindawo ezincinci ziziva zixinekile.
Thobisa ngee-shades ezithulileyo kunye nee-pastels -Ukuba ufuna ukuyithambisa inkangeleko yekhabhinethi enzima emnyama, i-shades ethulisiweyo yenye yeendlela onokuzijonga. Iipaseli zikhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukongeza umbala kumbala wakho wombala. Oku kulungele umninikhaya ofuna ukwazisa umbala omncinci kwiphalethi yabo ngaphandle kokuzibophelela kubungqongqo obucacileyo. Imibala ye-pastel ihlala ipholile okanye ifudumele.
Imibala epholileyo ye-pastel ibandakanya ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, grey epholileyo kunye nohlaza oluhlaza. Xa isetyenziswa njengombala wodonga iipastile ezipholileyo zenza ikhabhathi yomthi emnyama ibonakale ikhanya ngelixa ibalaselisa ubutyebi bayo kwaye ivumela iinkozo zayo zendalo ukuba ziphume ngakumbi. Ama-pastels afudumeleyo, kwelinye icala, abandakanya ipesika okanye umbala omthubi otyheli kwaye zinokusetyenziselwa ukongeza umtsalane kunye nokuqaqambisa ikhabhathi emnyama ekhitshini kwikhaya eliphefumlelweyo.
Kuba i-pastels yimibala elula, bahlala bekwenza ukuba izithuba zibonakale zinkulu. Ukudibanisa imibala ye-pastel kunye nekhabhathi emnyama ekhitshini kudala ukujonga okuthe kratya kwaye ikwabonelela ngemeko yokuphola kwindawo. Ukongeza koku, ungasebenzisa udonga olunemibala ye-pastel ukuba ufuna ukwenza iikhabhathi zakho zasekhitshini indawo ekugxilwe kuyo njengoko zingakhuphisani nobutyebi bemithi emnyama.
Xa udibanisa i-pastels nekhitshi elimnyama lekhitshi, khetha umbala ogqamileyo wombala kwiindonga zakho kwaye uzifake njengeetoni ezimnyama zokubuyela umva kwakho, unyango lwefestile kunye nezixhobo. Le ndlela idala ubeko lwee-shades ezahlukeneyo kunye neetoni ngombala omnye, ukugcina ukujongwa ngokubanzi kwendawo kuhambelana kwaye kubotshelelwe kunye.
Ngaphandle kwee-pastels, imibala inokuphononongwa iye emthunzini othobekileyo. Iinguqulelo eziguqulweyo zemibala zikwangumphelelisi ofanelekileyo wekhitshi elimnyama lekhitshi. Ukuhla kweethoni okanye ukuthuliswa kwee-shades kubandakanya uluhlaza oluhlaza, iteyipu, isileyiti luhlaza, njl. Imibala yepeyinti ethulileyo ilungele useto ngakumbi ngokwasekhaya njengekhaya lekhaya. Xa idityaniswe nekhabhathi emnyama yekhitshi, imibala ethululiweyo yenza indawo ishushu ngakumbi kwaye ipholile. Iinguqulelo ezithobekileyo zemifuno kunye neeblues kwaye zinokudityaniswa nekhabhathi ezimnyama kwindawo yanamhlanje.
Hlaziya ukuJongwa ngemibala egciniweyo kunye neqaqambileyo -Imibala eqaqambileyo ikwasebenza kakuhle nekhabhathi yokhuni olumnyama, ngakumbi ukuba ujonge i-eclectic vibe okanye ukuba ufuna ukubonisa ukudibanisa kwezitayile zoyilo. Oku kusebenza ngokuthe ngqo ukuba ufuna ukuhlaziya ukubukeka kwendlu okanye ilizwe eliphefumlelweyo ekhaya okanye ukuba ufuna ukwazisa ukuziva okuqhelekileyo kwindawo esekwe ekhitshini.
Nangona kunjalo, imibala eqaqambileyo kufuneka isetyenziswe ngokucocekileyo kwiikhitshi ezineekhabhathi ezimnyama. Nje ukuba usetyenziselwe eludongeni, unokuzibekelisa umthunzi ngokusetyenziswa kokuhambelana nezinto ezinomtsalane njengezinto zokukhanya, ubugcisa, kunye nezixhobo zekhitshi ezinje ngeembiza okanye iipani, udonga lokuhombisa okanye umbala oqaqambileyo kwi-splashboard yakho. Ukuba ikhitshi yakho ine-vibe yanamhlanje, i-hue eqaqambileyo kunye nesibindi ingasetyenziselwa isiqithi sekhitshi okanye ipeyinti yeefestile kunye neengcango. Ukudityaniswa kombala oqaqambileyo wepeyinti kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama kukwalungele ngakumbi indawo enokukhanya kokwemvelo okuninzi.
Imibala eqaqambileyo inokufumaneka kwimibala ephambili kunye nasesekondari. Iinguqu ezigcweleyo eziluhlaza, ezibomvu, ezimthubi zezinye zeyona mibala ethandwayo eqaqambileyo enokusebenza kakuhle ngeekhabhathi zekhitshi ezimnyama. Eminye imizekelo yayo iluhlaza okalika okanye iapile eluhlaza, irusi iorenji kunye nostadi.
Ukuqulunqwa kwesikimu sombala ogqibeleleyo konke malunga nokufumana ulungelelwaniso olufanelekileyo lweetintshi, imibala kunye neetoni zokugqitywa okwahlukileyo kwisithuba. Oku kunokufezekiswa ngokusetyenziswa kwezixhobo ezahlukeneyo zezinto ezibonakalayo ekhitshini ezizezi iikhabhathi, iindonga, umgangatho, isilingi, imiphezulu yeetafile, izixhobo zekhompyutha kunye nezixhobo.
Isitayela sexesha lekhaya lakho sisikhokelo esihle ekuqulunqweni kwesikimu esifanelekileyo sombala ekhitshini lakho. . Uhlobo ngalunye loyilo luhlala luhambelana nombala othile wombala ukuze wenze ukubonakala kwawo ngokubanzi. Umzekelo, amakhaya emveli ahlala enombala onzulu wemibala kunye nendibaniselwano yokwahluka kwezityebi kunye nezixhobo, ngelixa amakhaya anamhlanje nalawo esiqhelo ekhokelela kwicala lokungathathi cala, indibaniselwano yemibala eminye kunye nemincinci. Ukugcina isitayile engqondweni kunokukunceda kakhulu ekunciphiseni ukhetho lwakho lombala.
Uvakalelo kunye neemvakalelo ofuna ukuzifezekisa zinokukunceda ukuba ubone imibala efanelekileyo enokusebenzela ikhitshi lakho. Ukuba ufuna ukwenza i-vibe engaqhelekanga, umbala wephalethi wakho kufuneka ube mhlophe, umoya kwaye upholile. Ukuba ufuna ukukhuthaza imeko-bume edlamkileyo, isikimu sakho sombala kufuneka sibandakanye ukuqaqamba kwemibala ekhanyayo kunye neqaqambileyo. Okanye ukuba ujonge ukwenza into ngokusesikweni, umbala wakho wombala kufuneka ubandakanye ukungathathi cala kunye nemibala engagungqiyo kwaye icace gca.
Elinye icebo eliphambili lokuqulunqa iskimu esifanelekileyo semibala ekhitshini lakho kukukhawulela imibala ubuncinci kwiitoni ezintathu eziphambili, zixutywe nokungathathi cala. Ukubeka umbala omninzi kwisithuba kuyakhohlisa ukukhupha kwaye ngamanye amaxesha kungakhokelela kwisiphithiphithi esibonakalayo. Ke imibala emithathu lukhetho olulungileyo nolukhuselekileyo. Kwakhona gcina into eqhelekileyo ukuze isikimu sakho semibala sibambane ngokudibeneyo.
Xa kufikwa ekukhetheni iskimu sombala esifanelekileyo ekhitshini kunye neekhabhathi ezimnyama, kukho imibala emininzi enokusetyenziswa ukusukela umbala weenkuni ezimnyama osisityebi usebenza kakuhle ngazo zombini iziphelo zombala. Iyaguquguquka, ibhetyebhetye kwaye inokutshatiswa kukhetho olubanzi lwezixhobo, uburhabaxa kunye nokugqitywa. Nangona kunjalo, eyona njongo iphambili kukusoloko ukufezekisa ulungelelwaniso olugqibeleleyo lokukhanya kunye nemibala emnyama, ukuthamba kunye nokuqina okunzima, ubuqili kunye nobutyebi obucekeceke.
Zonke ezi ndlela zikhankanywe apha ngasentla zinokusetyenziswa njengesikhokelo ekuyileni iskimu sombala esifanelekileyo ekhitshini lakho. Nangona kunjalo, siza kugxila ngakumbi ekubambeleleni kwisitayile seli nqaku. Funda njalo njengoko sikukhokela kwimizobo yemibala yeekhitshi yeekhabhathi zeenkuni ezimnyama.
Ukukhetha iNkqubo yeMibala yeeKhitshi eziMnyama ngeSitayile
Nazi ezinye zeendlela eziqhelekileyo zasekhitshini ezisebenzisa iikhabhathi ezinemibala emnyama kunye neengcebiso zokuhombisa nokukhetha imibala yazo ehambelana nazo.
Uhlobo Lwekhitshi yelizwe Isitayile selizwe okanye isitayile sendlu yasefama ngokubanzi ibonakala ngokubonakala kwendalo okuvulekileyo, okucocekileyo nokumema. Inoluvo olulula nje oluvusa inkangeleko yokuhlala. Ezinye zeempawu zophawu lwentengiso zibandakanya ishelfu evulekileyo eyenziwe ngomthi, iikhabhathi, iiphaneli zebhodi yamaso kunye nemigangatho ebanzi yeplanga. Ukuba kukho into enye echaza ngokugqibeleleyo le ndlela yoyilo lwekhitshi kukuba irustic.
Inkqubo yemibala yeendonga- Imibala yelizwe isusela kokungathathi cala njengamhlophe, ukhilimu, amaxabiso kunye nomdaka ukuya kumbala wokuqala njengombala ubomvu, mthubi naluhlaza okwesibhakabhaka. Imibala ephambili inokuhlengahlengiswa kwiitintshi ezi-mellow okanye ii-hues ezindala. Zama ukufaka ii-hues ezithambileyo kunye ne-airy kuyo yonke iphalethi ukuba ufuna ukufezekisa ilizwe elinomtsalane ikhitshi vibe, nangona kunjalo ukuba ufuna ilizwe lesiNgesi elihombe ngakumbi, yiya ngemibala eyomeleleyo netyebileyo kwindalo efana nohlaza, iirubs kunye neepepuli. Izikimu zemibala yeekhitshi zesitayile selizwe ziya kudityaniswa kunokuthelekisa.
Imiphezulu yeetafile -Ezona zinto ziphambili zokubala Ikhitshi lendlu yasefama ziinkuni, imarble namatye esepha. Yiya kumbala wekhasethi okhanyayo, kwaye awunayilo loyilo. Eyona nto ukubheja kwakho lilitye lesepha kunye nombala wayo ongwevu ongwevu osebenza kakuhle njengesincedisi kwiikhabhathi zomthi ezimnyama. Igranite ehloniphekileyo okanye evuthayo enembonakalo ye-satin yendalo okanye ubume.
IKhabhinethi - Iifama zasekhitshini zihlala zihamba iikhabhathi ezimhlophe, nangona kunjalo, iinkuni ezimnyama lolunye ukhetho. Ukugqitywa kweenkuni ezimnyama kunye nombala ofanelekileyo kwezi zi-walnut ezimnyama, iJacobean, i-espresso kunye ne-mahogany ebomvu. Ngokubhekisele kuyilo lwekhabhathi, qwalasela umgangatho ophakamileyo ophakamise iikhabhathi zoyilo okanye iingcango zecango lekhabhathi ezicaba. Ngenye indlela, unokuphinda ujonge ngakumbi uyilo lwekhabhinethi yemveli kunye nezinto ezibunjiweyo okanye iingcango zeglasi.
Umgangatho - Sebenzisa iplanga elibanzi lomgangatho ngokukhanya ukuya kumbala ophakathi njengothuthu, imephu okanye ipayina. Olu hlobo lophahla longeza ukonwaba kwendalo kunye nokufudumala kwindawo. Ukujonga okunotyebileyo kunye nokuqaqamba, zama ukudibanisa iikhabhathi zasekhitshini zomthi ezimnyama ezinemigangatho yokhuni oluqinileyo.
Izixhobo -Yiya kwizixhobo ze-antique zobhedu, izixhobo ze-antique kunye neeknick knacks ezinesandla sokujikeleza okanye ukuziva ngexesha elifanelekileyo. Sebenzisa imibala egxininisayo kwiitoni zesiko ezinje ngeeblue blues, iigrey shades zemifuno kunye nezimnyama zezincedisi kunye nempahla ethambileyo enje ngeerugs zalapha, amakhethini, amalaphu, njl.
Uhlobo lwekhitshi Iikhitshi -Iikhitshi ezinomtsalane zeCottage zibonakaliswa kukuzonwabisa okucocekileyo nokwamkela. Ukugqitywa kolu hlobo lweekhikhini kuhlala kungafezekanga okanye kungavuthi kwaye kugqitywa kukuchukumiseka kwasekhaya. Amakhitshi esiNgesi esiqhelo ahlala enemibala emnyama evulekileyo ngemiqadi yomthi eluphahleni ukuyila ixesha lokuziva ixesha elifanelekileyo. Izinto zendalo ezinje ngelitye, izitena zihlala zongezwa njengee-accents zeendonga ukongeza umbala wasemhlabeni kunye nokuziva okumangalisayo.
Isikimu sombala weendonga-Imibala yodonga lwekhitshi eliphefumlelweyo ekhitshini zihlala zikhanya kwaye ziqaqambile. Eyona peyinti yodonga ixhaphakileyo imhlophe okanye ithoni ye-beige e-creamy, ngelixa kwabo banenjongo yokongeza umbala webala kwiphalethi yabo, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye notyheli oluthambileyo lolunye ukhetho.
Amanqwanqwa -Iitafile zekhitshi zasendlwini zihlala zinombala okhanyayo okanye ilitye lendalo elinemibala yomhlaba. I-Beiges, abamhlophe kunye nemibala ekhanyayo ngoncumo lobusi lukhetho olufanelekileyo kwiskimu sakho sombala. I-Wood lolunye ukhetho kwi-countertop ukuba ufuna ukongeza indalo kwindawo.
IKhabhinethi - Ikhabhinethi yamakhaya asezantsi ahlala emhlophe okanye enemibala eqaqambileyo, nangona kunjalo umthi omnyama ungasetyenziswa ukuba nje alinganisiwe kunye nodonga olukhanyayo kunye nomgangatho. Sebenzisa iingcango zekhabhinethi zeglasi okanye iipaneli zekhabhinethi ezilungiselelwe ngokulula.
Umgangatho - Olona hlobo luxhaphakileyo lokubeka umgangatho weekhitshi zekhitshi ziiplanga zomthi oqinileyo, ngelixa umbala wazo uvela ngokukhanya ukuya kwiithoni eziphakathi. Umgangatho wamatye endalo unokusetyenziswa kwakhona ukuba ufuna ukongeza imfudumalo kunye nokudala ukuziva ngakumbi kwe-rustic.
Izixhobo-zeekhitshi zasendlini, khetha i-brashi ye-antique ebunjiweyo okanye izibambo zobhedu kunye namaqhina. Olunye ukhetho kukusingathwa kwesinyithi esimnyama. Xa kuziwa ekufikeleleni, kwikhitshi elinomtsalane yindawo entle yobugcisa obunqabileyo kunye nezinto eziqokelelweyo. Ukufunyanwa kweentengiso zentengiso kunye nezinye izinto ezinqabileyo ziqhelekile kwesi sitayile.
Uhlobo lweGcisa - Uhlobo lweekhitshi lobugcisa zibonakaliswe kuyilo olulula kwaye zibeka ugxininiso kubugcisa, ukwakha okuqinileyo kunye nolwakhiwo olungqongqo. Kule ndlela, ukusebenza kubeka kwipremiyamu endaweni yokuhombisa. Eyona nto iphambili esetyenziselwa olu hlobo ngumthi, osetyenziswa kakhulu kwikhabhathi. Imibala ye-Accent iqaliswa ngokusetyenziswa kwe-backsplash ye-artisan kwiindawo ezipholileyo eziluhlaza kunye nohlaza.
Inkqubo yemibala yeendonga-Isitayile somsebenzi wengcibi yemibala ekhitshini ifumana ukhuthazo kwindalo. Iskimu sayo sombala sihlala senziwe ngombala omdaka, kunye nezinye iitoni ezishushu zomhlaba. Imibala eqaqambileyo yolu hlobo lwesitayile sasekhitshini bubomvu obunzulu, igolide efudumeleyo, i-rust oranges kunye nemithunzi yemifuno efana ne-moss green.
Kuba ikhitshi yesitayile segcisa lisebenzisa kakhulu imithi, umbala weendonga kufuneka ube mhlophe okanye ukhilimu. Khetha imibala yepeyinti enje nge-beige, umthunzi otyibilikileyo, okanye isiseko esinombala okhilimu kunye ne-tinge eluhlaza eluhlaza okanye etyheli. Gcina ukhumbula ukuba umbala wakho wodonga akufuneki ukhuphisane nobuhle bendalo bekhabhathi yamaplanga.
Imiphezulu yeetafile -Iitafile zekhitshi yesitayile segcisa zenziwe ngamatye endalo okanye ngomthi. Imibala isusela kwimibala ekhanyayo enje nge-beige, cream, sandy shades ukuya kwimibala emnyama njengombala omnyama.
IKhabhinethi - Umgangatho ophezulu wekhabhinethi yokhuni ithatha indawo ephambili yekhitshi yesitayile somsebenzi. Uyilo olulumkileyo, iingcango zekhabhinethi nobuso zinemigca ecocekileyo kunye nokuhonjiswa okuncinci. Iinkuni ezisetyenziselwa ikhabhinethi zihlala zinamabala okanye zishiywe zingagqitywanga ukubonisa iipateni zazo zendalo. Imithi etyebileyo kunye nemibala enzulu nayo iyathandwa kwesi sitayile sasekhitshini. Khetha i-cherry emnyama kunye ne-oki njengoko baneshushu, esikhanyayo phantsi.
Umgangatho - Iiplanga eziqinileyo kunye neeplanga zomthi oqinileyo zihlala zisetyenziswa njengezinto zokwakha iikhikhi zesitayile segcisa. Ngokwesiqhelo, umbala womgangatho ugcwalisa umbala wekhabhathi kwaye phantse unetoni efanayo. Kwakhona, umbala webala kwimigangatho eqinileyo yomthi zihlala zityebile ngombala kwaye zongeza imfudumalo ekhitshini.
Izixhobo - Izibambo zeKhabinethi ezinesiphelo se-antique esine-brashi, isinyithi se-satin okanye isinyithi esimnyama zilungele iikhitshi zesitayile somsebenzi wobugcisa. Uyilo lwabo kufuneka lujolise ekusebenzeni, kufuneka kube lula ukulugcina kwaye lube nesitayile sokwakha esomeleleyo esinemigca echaziweyo.
Iikhitshi zale mihla Iikhitshi zesitayile zangoku zilungile, zilungelelanisiwe kwaye zinobunkunkqele. Le ndlela yekhitshi ibonakaliswe yimigca ecocekileyo, iifom ze-angular, indawo egudileyo kunye nembonakalo encinci. Namathela kwiindawo ezibonakalayo kunye neenkuni ezipholileyo.
Umbala weendonga-Ukusukela amakhitshi anamhlanje anembonakalo encinci, zama ukunamathela kwimibala engathathi hlangothi yeendonga. Owona mbala uthandwayo wepeyinti osetyenzisiweyo umhlophe njengoko unika indawo imvakalelo eqaqambileyo kunye nomoya. Kulabo bafumanisa ukuba umhlophe uyasilela, yiya kwenye indlela yanamhlanje enje nge-hue epholileyo. Izikimu zombala ezingathathi hlangothi zixhaphakile kolu hlobo, kodwa kwezinye iimeko umbala oqaqambileyo waziswa kwiphalethi ngokusebenzisa udonga lwe-aksenti okanye i-splashboard.
iilokhwe zokunxiba emtshatweni ngoJuni
Imiphezulu yeetafile-Kwiitafile zokubala, khetha izixhobo ezigudileyo, ezibushelelezi nezingaqhelekanga. Ukuzaliswa okuncinci, kungcono. I-Granite, imiphezulu eqinileyo kunye neetafile ze-quartz zihlala zisetyenziselwa le ndlela ngenxa yobuhle bayo obulula kunye nokubengezela okukhazimlayo kunye namachaphaza awongeza umdla kwisithuba. Ukuba ikhitshi lakho langoku lisebenzisa ikhabhathi enombala omnyama, ncamathela kwibala lokubala elinombala ofana nomhlophe, ukwenza umahluko. Ngenye indlela, intsimbi engenasici inokusetyenziselwa uvakalelo lweshishini lwanamhlanje.
IKhabhinethi - Kwikhabhathi enombala omnyama, iikhikhini zala maxesha zihamba ngemibala yeplanga e-polished kunye ne-exotic. Ezi shades zifunyanwa kwisiphelo esimnyama sombala, njenge-ebony, i-espresso emnyama kunye nomnyama. Ngokweyilo lekhabhinethi, ucango lwekhabhathi kunye nobuso ziqhelekile, azicacanga kwaye azinabumba okanye ipaneli.
Umgangatho -Izinto zokwakha umgangatho zihlala zenziwe ngeethayile zekheram ezinkulu ezisikiweyo kunye nezipolishiweyo ngombala ongathathi hlangothi njengemhlophe, imibala emhlophe okanye emnyama. Ngenye indlela, ukutyibilika komthi oqinileyo ukusuka ekukhanyeni ukuya kumbala omnyama kunokusetyenziswa.
Izixhobo - Ukuphathwa kweKhabinethi kunye nezixhobo zeekhitshi zanamhlanje eziphefumlelweyo zilula kwaye zichazwa yimigca ecacileyo. Kwakhona, kukho umhombiso omncinci ochaphazelekayo. Ukuphathwa kweKhabinethi kuhlala kuyinto ende, encinci kunye nesinyithi esenziwe ngebrashi okanye isiphelo se-satin. Ngamanye amaxesha, izibambo zekhabhinethi azifuneki kwaye zifuna kuphela indlela elula yokutyhala.
Kwiikhikhini zala maxesha, ezinye izixhobo zihlala zisetyenziswa ukwazisa ukutshiza kombala ukwenza indawo iphile. Imibala eqhelekileyo yendlela ekhitshini yanamhlanje ziqaqambile kwaye zinesibindi zemibala eluhlaza, ebomvu kunye neorenji.
Xa ukhetha umbala olungileyo wokuhamba kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama, misela kuqala ukuba ufuna ukuphucula ubutyebi bemithi emnyama okanye ukuba ufuna ukwenza umahluko. Umbala we-flooring yakho uya kuxhomekeka kakhulu kwiimpawu eziphambili zobuhle ofuna ukubonakala kwisithuba.
Ukudibanisa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinemigangatho ekhanyayo yemigangatho yiperi yeklasi esebenza ngokungaphelelwa lixesha kwiindlela ezininzi zoyilo. Imigangatho emhlophe kunye nemibala ekhanyayo yenza umahluko, yahlula ubunzima kwaye yazisa ukulingana phakathi kwekhabhathi enombala omnyama.
Ukuphucula umbala wekhabhathi yomthi omnyama khetha umbala omnyama kumgangatho wakho. Ukutsala oku, zama ukudibanisa iinkuni ngomthi. Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama kunye nomgangatho omnyama onzima womthi zenza ukubonakala okunotyebileyo kunye nokuqaqamba, okwenza iikhikhini zive zibutofotofo kwaye zintle, ngelixa zazisa ulwamkelo kwindawo.
Ukhetho lwakho lombala kumgangatho oya kuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo ozisebenzisayo. Olunye ukhetho lwezinto zokwakha zodaka lubandakanya iiplanga, amatye endalo kunye neethayile.
Okwangoku ikhitshi yesiqithi esiphindwe kabini kunye ne-bar ephakanyisiweyo yesidlo sakusasa, ukukhanya kwe-porcelain floor kunye neekhabhathi zomthi ezimnyama.
Imigangatho yeplanga ekhanyayo ihlala ibhangqiwe kunye neekhabhathi zomthi ezimnyama ngenxa yokuba zenza umahluko. Imigangatho yeenkuni enesiphelo esimhlophe yenye yezona zinto zixhaphakileyo ekhitshini lomthi omnyama njengoko zihamba kakuhle nangantoni na. Baqhekeza ubunzima begumbi, benza isithuba sive ngathi sinomoya kwaye siqaqambile, ngelixa besenza ibhalansi phakathi kwezinto kunye nokugqitywa okusetyenzisiweyo kwisithuba. Kwakhona, imigangatho elula yeplanga ayikhuphisani nekhabhathi emnyama yomthi.
Kukho inani leentlobo zeenkuni ezikudidi lweenkuni ezikhanyayo kwaye zinokusetyenziswa njengezinto ezothusayo zokubeka umgangatho. Uhlobo oludumileyo yimephu kunye ne-oki, kodwa kukho ezinye iindlela onokukhetha kuzo njenge-hickory kwaye ubuze. Imigangatho yeplanga ekhanyayo ihlala iza njengeplanga yomthi okhuni, imigangatho yokuhombisa, iplanga okanye umbala omhlophe.
Imephu luhlobo lomthi othambileyo obonakala phantse ngombala omhlophe okanye omhlophe. Ngamanye amaxesha, umbala wayo wekrimu uxutywe ngombala obomvu okanye wegolide. Iphethini yegrafu yokhuni olunemibala ekhanyayo ngokuthe ngqo ithe tye kwaye inoburhabaxa nkqu nokuthungwa. Imigangatho yeplanga yeemaphu ifanelekile kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama kuba zivumela ubuhle bendalo beenkuni ezityebileyo ukuba bume emajukujukwini.
Olunye uhlobo lweenkuni ezikhanyayo yiAsh. Uthuthu okanye uthuthu omhlophe unombala omdaka kakhulu ukuya kumbala omdaka ophakathi. Ubume bokutya okuziinkozo buyafana ne-oki ethe rhoqo kwaye ithe nkqo, kodwa ngamanye amaxesha inokuba krwada. Olu hlobo lophahla phantse lube nembonakalo eblantshi kwaye lusebenza ngokugqibeleleyo ekulinganiseni ukubonakala kweekhabhathi zekhitshi ezinzima.
IHickory yenye yezinye iintlobo zeenkuni ezikhanyayo ezinombala okhanyayo kumbala omdaka ophakathi ogqamileyo nobomvu kancinci. Ukubonakala kwayo kwe-rustic kuyenza ifaneleke njengesixhobo esomgangatho wekhitshi eliphefumlelweyo elineekhabhathi ezinemibala emnyama.
Xa usebenzisa iiplanga ezikhanyayo ukutshatisa iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama, qiniseka ukuba izinto zakho zigqunywe kakuhle ngebala okanye ngetywina lokuzikhusela. Ukugqitywa okugqityiweyo kunokusetyenziselwa ukunika ukukhanya komgangatho okhanyayo umbala omhlophe ngakumbi ngelixa amabala asekwe kwioyile enokusetyenziswa ukuba ufuna ukongeza umbala omthubi kancinci kumbala womthi weplanga wendalo.
I-backsplashes yekhitshi ayikhuseli kuphela iindonga zakho kumabala kodwa ikwabonelela ngesixa esikhulu somdla obonwayo kwindawo. Inika ithuba elifanelekileyo lokwazisa umbala kunye nokugxininisa kwiskimu sakho sombala.
Kukho inani lezinto ezinokusetyenziselwa ukubuyela umva ekhitshini kwaye uhlobo ngalunye luneempawu zazo ezilungileyo nezingalunganga. Umceli mngeni wokwenyani ekukhetheni i-backsplashes kukufumana umbala ofanelekileyo oza kudibanisa iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama. Ngokwesiqhelo, amanyathelo okuqala abandakanyekayo ekukhetheni umbala ofanelekileyo uya kubandakanya ukumisela eyona nto iphambili oyifunayo ukuze ubonakale ekhitshini lakho. I-backsplash yakho inokudibanisa okanye ukungafani nayo yonke ikhabhinethi yakho. Nangona kunjalo, ngenxa yeekhabhathi zekhitshi zomthi omnyama, ezi zokugqibela zikhethwa ngakumbi.
Iikhabhathi zomthi ezityebileyo nezimnyama sele zinombala oqinileyo kwaye ukuze zenze ibhalansi egqibeleleyo, umahluko unokusetyenziswa. Ngokwesiqhelo, iikhabhathi zomthi omnyama wekhitshi zibhangqwe nge-backsplashes enemibala ekhanyayo kunye neetafile ukulungiselela ukophula ubunzima bazo kunye nokwenza ukuba indawo ibonakale ikhanya ngakumbi. Kuxhomekeka kwisitayile sekhitshi lakho, izinto ezahlukeneyo zinokuphononongwa ukwenza iziphumo ezibonakalayo zendawo yakho. Kodwa kananjalo, zama ukugcina engqondweni ukuba uyilo ngumba wokuzikhethela kunye nokukhetha, kwaye unokukhetha nawuphi na umbala kunye nezinto ezilungele incasa yakho kunye nesitayile.
I-backsplashes enemibala engathathi hlangothi ifanelekile kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama. Imibala ekhanyayo enje nge-beige okanye ukhilimu zizibini ezikwiklasi engaphumi kwisitayile. Baye bagcine i-backsplash ekukhuphisaneni nobutyebi bekhabhinethi yamaplanga. Oku kukwasebenza kuninzi lwezitayile zoyilo lwekhitshi.
Olunye ukhetho lombala lumdaka kunye neetoni zomhlaba. Iitoni zomhlaba kunye nee-shades zesanti zilungile kumdlalo omnyama wekhitshi lekhitshi. UBrown unobungqongqo bendalo kunye nobushushu obenza ukuba ibe lolunye lolona khetho lubalaseleyo lokudala iskimu sombala esisebenzayo. Umdibaniso wombala usebenza kakuhle ngokukodwa kwiikhitshi zesitayile zelizwe ezindala, ngakumbi ukuba izinto zililitye lendalo.
Nangona kunjalo, unokwazisa umbala othile kwipalali yakho iphela ngokudibanisa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinombala ogqamileyo njengeethoni zobusi zegolide okanye imibala eluhlaza njengoko zizalisa umbala omdaka kakhulu.
Nazi ezinye iingcebiso ekukhetheni i-backsplash elungileyo yeekhabhathi zekhitshi zomthi ezimnyama:
• Iithayile zikaMoses kunye nezeglasi . Iithayile zikaMoses kunye nethayile yeglasi zenza iso libambe umva eligalelo elinesixa sokuqaqamba okuthambisa ubunzima bekhabhathi yekhitshi emnyama eyenziwe ngomthi. Kwakhona, olona ncedo luphambili lokusebenzisa iithayile zemibala kukuba ikwazi ukwenza ngokwezifiso kakhulu. Uninzi lwabathengisi lubonisa ukhetho olungenasiphelo lwemibala eza ngeendlela ezahlukeneyo njengokugqitywa kwesinyithi, ukugqitywa kweeperile, okucwebezelayo kunye nematte. Le mibala inokudityaniswa ngokweepesenti ezahlukeneyo, ekuvumela ukuba wenze owakho umxube wemibala kwimpahla yakho yokubuyela umva. Udibanisa imibala emi-3 ukuya kwezi-4, okanye nangaphezulu kuxhomekeke kukhetho lwakho. Ngenye indlela, unokukhetha umbala omnye oqinileyo. Iithayile zikaMoses kunye nezeglasi zinokufakwa kwiipateni ezahlukeneyo.
• Iithayile zangaphantsi . Iithayile zangaphantsi ngumdlalo ohambelana nekhabhathi yamakhitshi amnyama ngenxa yokungathathi cala. Umbala omhlophe, omhlophe wezi tile zincinci zincinci zintathu ezi-intshi ezi-6 nge-6 ceramic zinegalelo lokuqaqamba nomoya kwiindawo zekhitshi. I-classic kunye nexesha elingenasiphelo leetayile zangaphantsi zibenza umdlalo ogqibeleleyo kwiindlela ezininzi zoyilo, ukusukela kwimveli ukuya kwiikhitshi zale mihla. Ukujonga kwabo okucocekileyo nokungagungqiyo kubenza babe yinto efanelekileyo yokubuyela umva kweekhitshi ezincinci kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama. Ikwadala ingxelo elula, engoyiki kakhulu kwaye engoyisi ukubonakala kwekhabinethi yemithi emnyama etyebileyo.
• Iithayile zeCeramic . Ukunika iikhitshi zemveli ezimnyama ujongo oluhlaziyiweyo, zama ukubanika twist ngokusebenzisa i-tile backsplash yangoku. Iithayile lolunye ukhetho oluthandwayo lwezixhobo zokubuyela umva ngenxa yoluhlu olubanzi lwemibala, uburhabaxa, uyilo kunye neepatheni abazongena kuzo. Ngokukhetha okungapheliyo, amathuba okuyila nawo akanamda. Iithayile ezinepateni elula enemigca zizinto eziguquguqukayo zokubuyela umva kwaye zenza ukongeza okumangalisayo kwiikhabhathi zasekhitshini ezimnyama ngakumbi ukuba bazisa umbala oqaqambileyo wombala. Imigca ethe tyaba kunye nomxube wemibala efudumeleyo kunye nezinto zendalo zenza amakhitshi amkele kwaye amnandi.
ilokhwe ebomvu yomtshato
Ingcebiso yoMyili: Zama ukuthelekisa isixhobo sentsimbi esingena-stainless kunye nomxube weetayile zala maxesha ezipholileyo nezimnyama ukuzisa into evisisanayo ehambelana nendawo yakho.
• Iithayile zomtya . Iithayile zomtya ziitiles zeceramic okanye ze-porcelain ezisikwe zaba yimicu kwaye zicwangciswe kwipateni ethile. Cinga ngayo njengeethayile zemibala kodwa endaweni yokuba nobume besikwere, zide zaze zaza zaze endaweni yeglasi, zenziwe nge-porcelain okanye i-ceramic. Njengamathayile e-mosaic, i-tile yokwahlula ikwazi ukwenza ngokwezifiso kwaye inokusetyenziselwa ukuvelisa imibala emininzi kunye noburhabaxa. Benza iikhikhini ngokubonakalayo zinomdla kodwa banoluvo lokuma kunye nokungathathi cala kubo. Imibala yokulinganisela ekhitshini eneekhitshi ezimnyama zasekhitshini ngokusebenzisa iithayile zemibala ezingathathi hlangothi, ngakumbi ezo zinemibala engwevu. Ngwevu igcina iskimu sombala singade sibe buthuntu kwaye siboleke amandla okuzola kwisithuba.
• Ipateni ebuyela umva . I-backsplashes eyifomathi yenye yezona zinto zibuyele umva kule mihla. Ipateni inokufezekiswa ngeendlela ezininzi-enye kukusebenzisa iphepha lodonga kwaye ubeke iiphaneli zeglasi ezinobushushu ngaphezulu kwayo ukuze ikulungele ngakumbi ukusetyenziswa kwe-backsplash, ngelixa enye indlela kukusebenzisa iithayile eziprintiweyo. Iipateni zinokusetyenziselwa ukwaphula ubunzima bekhabhathi emnyama yasekhitshini. Nangona kunjalo, oku kunokuba yinto enzima ukuphuma. Ukuba ipateni yakho ixakeke kakhulu, utyekelo lokuba ikhitshi lakho linokujongeka linzima. Fumana ibhalansi egqibeleleyo usebenzisa iipateni ezifihlakeleyo kwaye uzame ukubandakanya imibala ehambelana nayo njengamdaka ukuhambelana neekhabhathi zekhitshi ezimnyama. Kwakhona, fumana ipateni efanelekileyo ehambelana nesitayile esikhoyo ekhitshini lakho. Isitayile ngasinye sineempawu ezihambelanayo-ngokwesiko, umzekelo, zibonisa iintyatyambo, i-brocade okanye iiprinti ze-paisley ngelixa izitayile zangoku zinendlela elula, ethe tye kunye nejiyometri.
• ILitye leNdalo . Amatye endalo angasemva agxininisa kubutyebi bekhabhathi yokhuni olumnyama kunye nokuphucula imibala. Olunye uncedo oluphambili ngokokubuyela umva kwelitye lendalo kukuba ziyaguquguquka njengoko isebenza kakuhle phantse kuwo nawuphi na umbala wekhabhathi kunye neendlela ezininzi zoyilo. Ukubuyela umva ngamatye endalo kufaka isandla kwindalo yendalo kwaye kunika ukufudumala ekhitshini kubenza bazive bemema ngakumbi. Olu hlobo lwezinto zilungelelene ngokufanelekileyo kwiikhitshi zesintu ezinje ngeekhitshi zelizwe ezinemvakalelo ye-rustic, yexesha elifanelekileyo kunye nemfuno yokugqitywa kwendalo. I-Marble, i-travertine kunye ne-slate ziphakathi kweminye imizekelo yayo.
Unokukhetha i-backsplash efanelekileyo yelitye esekwe kwisitayile sekhitshi lakho. I-marble backsplashes, umzekelo, ifezekile ukuba ufuna ukongeza into yobunkunkqele kunye nokuziva okunethezeka kwiikhitshi zemveli eziphefumlelweyo. Ipateni yabo yendalo yokuhombisa kunye nomphezulu ogudileyo uzisa umahluko kubume ekubonakaleni ngokubanzi kwekhitshi. Nangona imibala ekhanyayo, imarble inembonakalo etyebileyo enokuma emajukujukwini. Kwiikhabhathi zasekhitshini zomthi omnyama, yiya kumbala okhanyayo okanye omhlophe wemabula emhlophe ukuthambisa ukujonga.
I-Travertine lolunye uhlobo lwamatye endalo anokusetyenziswa njengesixhobo sokubuyela umva kwirustic, ilizwe lakudala, i-antique, isiko, ilizwe kunye nekhitshi eliphefumlelweyo. I-Travertine inombala okhanyayo ngokwendalo kwaye inomxube we-creamy background kunye ne-undertones emdaka kunye nokukhanya okukhanyayo. Xa udityaniswe nekhabhathi yamakhitshi omthi omnyama, i-travertine backsplashes izisa ibhalansi elungileyo yokwahlula kunye nokuzalisa imibala. Inika imvakalelo efudumeleyo kunye nehlabathi elidala elinobuchule kwizithuba zasekhitshini. Ukwenza i-backsplash yakho kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama ezinomdla ngakumbi, khetha i-travertine yendalo kwifom yezitena. Ipateni yokungenelela yongeza umdla obonakalayo kunye neyantlukwano ngokwembonakalo.
Eyona nto iphambili ekhitshini yikhabhathi ethatha malunga ne-80% yendawo iyonke. I-backsplash, kwelinye icala, yenye yezinto ezibonakalayo ezizisa ukuhombisa kunye nokugxininisa kwindawo yasekhitshini. Kodwa ngaphandle kweekhabhinethi kunye ne-backsplash, ii-countertops nazo ziyinxalenye ebalulekileyo yekhitshi. Ngokudibeneyo, ezi zinto zintathu zinceda ukwenza ukujonga okulingeneyo kwekhitshi lakho.
Kukho inani lezinto zokubala ezinokuthi zisetyenziselwe ukudibanisa nekhabhathi emnyama yekhitshi. Oku kubandakanya amatye endalo afana nemabhile kunye negranite, ilitye elinobunjineli njenge-quartz, indawo eqinileyo okanye iCorian, ukhuni oluqinileyo kunye nentsimbi engenasici. Isixhobo ngasinye siza ngemibala eyahlukeneyo kunye noyilo.
Njengokukhetha imibala yepeyinti okanye izinto zokubuyela umva, ukukhetha imibala yekhawuntari yokuhamba nekhabhathi zakho zasekhitshini kunokudideka ngenxa yokhetho oluninzi anokuluhlola.
Apha ngezantsi sibonisa ezinye zeemibala eziphambili zekhawuntara yeekhitshi ezineekhabhathi zomthi ezimnyama.
Imiphezulu yeetafile eziNgwevu . Imibala engwevu ngumbala wekhabhathi ofanelekileyo wekhabhathi zekhitshi emnyama ngenxa yokungathathi cala. Ezi zimbini zakudala zomthunzi opholileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zoyilo kunye neephalethi zemibala eyahlukeneyo. Umbala ocekeceke wegrey uzisa into epholileyo eyahluke kakuhle kwiitoni ezifudumeleyo zemithi emnyama etyebileyo. Kwangelo xesha, ikwazisa ngokuvisisana njengoko idibana kakuhle nezinto zendalo kunye nokugqitywa. Ukutsala ukubhangqwa kweklasikhi yee-countertops ezingwevu kunye nekhabhathi yekhitshi emnyama, zama ukudibanisa imibala kunye nokuyisebenzisa njengento yokudibanisa. Yitshatise kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici kwaye ukhethe umva obuyelwe ngumva onezandi eziphantsi ezingwevu nezintsundu. Cinga izitayile zasekhitshini zodidi zokujonga. Eminye imizekelo yokudityaniswa kombala iya kuba ziitafile zegranite ezingwevu kunye neekhabethe zemephu.
Imiphezulu yeetafile zeGolide kunye neBrown . Ukuba imiphezulu yeetafile engwevu izisa into epholileyo kwiikhabhathi zasekhitshini ezimnyama, imiphezulu yeetafile zegolide zongeza ukufudumala kunye nochuku kwindalo. Imibala ye-countertop enesiseko esingathathi hlangothi esigxininiswe ngegolide kunye nobusi obunemaminerali yensimbi yonyusa imibala yekhabinethi yomthi omnyama. Zikwasebenza njengombala ohambelana nokudibanisa. Igolide kunye neetafile ezimdaka ngombala zilungele ngakumbi iikhabhathi ezinemibala ye-espresso kuneekhabhathi zetsheri ezimnyama, kuba itsheri inee-undertones ezibomvu. Ngokudibeneyo oku kubhangqwa kudala isikimu sombala we-monochromatic.
Ukuvumela umbala wendalo weetafile zegolide ukuba zikhanye, khetha isitayile sokuhlela esilula kwaye emva koko usidibanise nekhabhathi engafakwanga kwaye icacile enezixhobo ezilula. Eminye yemizekelo yee-countertops ezinemibala yegolide yigranite entsha yegolide yaseVenice kunye negranite yaseSanta Cecilia.
Imibala eyahlukileyo . Ukudibanisa umbala omnyama wekhitshi lekhabhathi yekhabhathi enemibala ekhanyayo yindibaniselwano yakudala. Abanye bade bayithathe njengefomula yokungqina xa isiza kuyilo lwekhitshi. Ukuthelekisa iikhabhathi zakho zasekhitshini kunye neetafile zakho zongeza ubunzulu, ubukhulu kunye nokwenza ubuhle obunomdla ngokubonakalayo ekhitshini lakho. Nokuba ikhitshi lakho lixesha langoku okanye ngokwesiko, lo mxube weklasi uya kulungela zombini ezi zitayile.
Imibala eyahlukileyo yeekhabhathi zekhitshi ezimnyama zibandakanya imiphezulu yeetafile ezimhlophe kunye ne-beige. Imiphezulu yeetafile emhlophe ilungile kwiikhabhathi zekhitshi zomthi omnyama kuba ziyaphula ubunzima beemithi ezicebileyo ngelixa zisenza indawo ibonakale icocekile kwaye ikhanya. I-Beige kunye nokucima ii-countertops ezimhlophe, ngakolunye uhlangothi, zinemibala e-creamy edibeneyo kunye ne-tinge efudumele kakhulu. I-Beige isebenza njengamhlophe, kodwa yazisa ngebhalansi egqibeleleyo yeethoni ezipholileyo kunye neempawu ezifudumeleyo. Xa kuthelekiswa nomhlophe, ii-countertops ze-beige zifudumele kwaye ziyamema.
Imiphezulu yeetafile emhlophe ilungile kwikhabhathi yamakhitshi amnyama kuyo nayiphi na indlela yoyilo. Kwiindlela zekhitshi zale mihla ezineekhabhathi ezimdaka ngombala omnyama, isetyenziswa kakhulu xa ithelekiswa ne-beige. Ngelixa imiphezulu yeetafile ze-beige, kwelinye icala, zixhaphake kakhulu kwiikhitshi zesiko kunye nezasendulo ezinekhabhathi yomthi omnyama.
Eminye imizekelo yokubhangiswa kweklasikhi yamaplanga amnyama kunye neetafile ezinemibala ekhanyayo zezi: ikhabhathi enebala elinemibala eyenziwe ngeplanethi kunye neetheyitile emhlophe yomkhenkce (yale mihla okanye yangoku), iikhabhathi zamaplanga zeJacobean ezinepaneli yekhabhathi kunye neKashmir white granite (ilizwe) , Iikhabhathi ezibomvu ze-Mahogany shaker ezine-bianco antico cream granite (yesiko).
Ithoni ebomvu yendalo yaseMahogany ivelisa ubuhle beekhitshi zesiko, kwaye lo mzekelo uza kubona ukuba oku kudityaniswa njani nokugqitywa okwangoku. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zigcina ithoni yaso yoqobo yendalo kwaye isetelwe ngokuchasene ne-capiz-shell backsplash kunye ne-cream granite, ngelixa ikhawuntari enkulu yesiqithi ipenda i-mahogany yokugqiba ngaphezulu ngepeyinti emhlophe, iyenza ukuba iphume kumnyama omnyama ugqibe, kodwa ikwagxininisa iinkuni ezimnyama zeekhabhathi eziphambili zekhitshi. Indibaniselwano yenza ibhalansi enomdla nenomdla kwimibala ekhanyayo kunye emnyama.
Kule khitshi, iMahogany enamnyama yayisetyenziselwa zonke iikhabhathi zayo. Umthi omnyama wawudityaniswe namabala amnyama esepha yesanti kunye neethayile zecarlus ezingwevu ezimnyama emva kokutshiza ngasemva, kwaye ukuba ujonga ngakumbi, uya kuqaphela ukuba endaweni yokusebenzisa ialuminiyam okanye idrowa yentsimbi engenazingcingo etsala okanye iingcango zekhabinethi, olu luyilo lusebenzisa inotshi eqingqiweyo iinkuni ngokwazo ukulingisa i-drawer eqhubekayo. Ukulula kunye nokubukeka okumnyama kweli khitshi kuyenza ibonakale intle kwaye ineklasi.
Uyilo oluvulekileyo lwenza indawo ekhanyayo, ebheke bucala ngakumbi, kwaye kulo mzekelo wekhitshi, ngoncedo lwesicwangciso sayo somgangatho ovulekileyo kunye nokukhanya okwaneleyo kwendalo, iikhabhathi ezixhonyiweyo zihamba ngombala omnyama kakhulu. Iikhabhathi ezifakwe ipaneli zipeyintwe ngombala omnyama ongwevu weduco onika umahluko omnandi kwitheyibhile ye-beige granite esetyenzisiweyo.
Le khitshi inkulu kwaye yahlulwe yangamacandelo amabini. Yenza, nangona kunjalo, isebenzisa isitayile esifanayo sekhabhathi zasekhitshini kunye nebala elifanayo kunye nokugqitywa kweenkuni ekhitshini. Izinto zokubala zekhitshi kwiikhabhathi zeposi zimhlophe ngokucacileyo kwaye zidityaniswe neethayile zamatye endalo kwi-backsplash. Kwisiqithi sasekhitshini, nangona kunjalo, kwasetyenziswa i-marble emhlophe ene-veining ebonakalayo. Iingcango zekhabhathi ezisisiseko zixhonywe ngesiphelo esihle seoyile, esenza umphezulu ogudileyo.
Ikhitshi elilula elidala elisebenzisa i-Mahogany emnyama iikhabhathi ezigcotyiweyo ezineenkcukacha zepaneli, kunye neendidi zeemabhile ezibonwe kwi-backsplash kunye ne-top top counter counter. Ibala elisetyenziswe kwiikhabhathi liluhlaza, nangona kunjalo, isiqwenga esikhulu kakhulu esijikeleze isiqithi sifihla uninzi lweekhabhathi ezimnyama kwaye senza ikhitshi libonakale liqaqambile.
Kuba eli khitshi lenzelwe ukulingana kwindawo encinci, ukukhanya kwendalo okuvuza kwiifestile kuyanceda ekwenzeni eli khitshi libukeke libetha. Ukuqala kwitafile yokuthengisa, uya kuqaphela ukuba yonke ikhitshi isebenzisa islabha esityebileyo segranite ebomvu-orenji, isenza ifuthe endaweni yombala wayo ongqindilili nongavamile. Iikhabhathi ezisisiseko zisebenzisa iingcango zale mihla ezigqityiweyo kwaye zigqityiwe ngombala obomvu-mdaka / sienna duco. Izandi zangaphantsi ezibomvu zombini isiseko kunye ne-countertop zenza indibaniselwano elungileyo yendalo, ngelixa ithoni etyheli yesitulo sebar ye-teak yongeza iintlobo ezahlukeneyo.
Olu luyilo lwangoku lwekhitshi olusebenzisa iiLaminates ezimnyama zaseMahogany njengokhetho lwalo lokugqiba iikhabhathi zalo. Ngenxa yokuba ukungqubana kweorenji kunye nobomvu kumgangatho we-Oak kunye neekhabhathi sele zingqineke ziyindibaniselwano enesibindi kodwa emnandi, izixhobo zekhawuntara ezisetyenzisiweyo bezilula - imarble yekhawuntara yesiqithi kunye nomphezulu omhlophe oqinileyo wekhabhathi eziphambili. Ukudityaniswa kwamathoni eenkuni anemiphetho ebukhali, ebukhali yeekhabhathi kuyinika into eyamkelekileyo.
Kule khitshi kwasetyenziswa iinkuni ezimthubi ngakumbi endaweni yeethoni ezibomvu ezisekwe ebomvu, njengoko imigangatho sele imnyama kakhulu. Ukujonga ngokusondeleyo, uyakuqaphela ipateni yendalo ye-burly kumphezulu womthi uyinike inkangeleko eyodwa kunye nokuthungwa. Ithoni etyheli ikwanceda ukukhanyisa indawo ngaphandle komgangatho omnyama womthi osetyenzisiweyo. Kwii-counterops, i-quartz emhlophe eneekristali ezinemibala yeepesika zazisetyenziselwa ukongeza ukubonwa okubonakalayo kuyilo.
Le khitshi yanamhlanje ineebhalansi enkulu yemibala. Okokuqala, isicwangciso esivulekileyo sendawo sinceda ukwenza ikhitshi libukeke libanzi kwaye limema. Ngaphandle kwalonto, kukho ulungelelwaniso oluhle kunye nokungafani kwemibala - kukho inani elifanelekileyo lokukhanya kunye nemibala emnyama edlala ngokujikeleza isithuba. Imigangatho ngamaplanga enamabala amnyama kwaye umbala wawo omnyama uveza ukukhanya kwe-beige kweentsika ezinamatye kunye nophahla olumhlophe. Iindonga ezininzi zigcinwa zikhanya, kusetyenziswa umbala omhlophe kunye neefestile ezinkulu ezikhanyisa indawo. Ikhitshi lisebenzisa izixhobo zokubala ezimnyama zomthala omnyama ngaphezulu kweekhabhathi ezimnyama zomthi weWalnut. Inkangeleko yeklasikhi edityanisiweyo kunye nembonakalo yanamhlanje yekhawuntari ephezulu kunye nayo yonke indlu iyahlaziya kwaye intle.
Iindonga zemaroni zeli khitshi zenza ukuba zibukeke zintle kwaye zinodidi kwaye zilunika uhlobo lobushushu bothando. Isiphatho sesibane songeza kwisibheno sothando, esincediswa ziingcango ezihonjisiweyo zepalnut. Oku kuphakanyiswe kukukhanya okuphezulu kwe-quartz counter counter kwaye ine-backsplash tiles eneepateni zegolide. Isiqithi sekhitshi sineenkuni, kubandakanya nomphezulu waso, kwaye sigqityiwe ngombala omnyama.
Xa kuthelekiswa neminye imizekelo, eli khitshi linobutofotofo, ukukhanya okulula. Imigangatho ngamaplanga alungisiweyo emephu, kwaye iikhabhathi zekhitshi ziqinile i-Oak enesiphatho esihle kunye neprofayili yanamhlanje. Kwakugalelwe igranite eluhlaza kwaye isiqithi esincinci sekhitshi sinebhloko eqinileyo yesilarha endaweni yelitye ngaphezulu. Imiphetho ecocekileyo kunye neprofayili yeekhabhathi ziyenza ibonakale yanamhlanje ngaphandle kweenkcukacha zayo zakudala, kwaye iyenza ibonakale ihlaziya ngelixa igcina eso sibheno sihle.
Ikhitshi yanamhlanje apho indawo yokugcina yandiswa khona. Udonga olunye luphela lubekelwe udonga lokugcina, kunye nee-Refs ezimbini zewayini kunye nee-oveni ezakhelweyo. Ngaphandle kwalonto, kukho isiqithi esikhulu sekhitshi kwityala elifanayo leetshokholethi eludongeni lokugcina kwaye lifakwe ngemabhile. Isilingi isebenzisa amaplanga omthi ukuwugqiba owongeza ubume kunye nephethini kwisithuba. Imibala esetyenzisiweyo ubukhulu becala yimigangatho emnyama-phantsi engwevu kunye nokugqitywa komthi kwiithoni zomthi omnyama, kodwa ibhalansi kunye neepatheni zezinto ezisetyenzisiweyo zenza indibaniselwano ekholisayo.
Le khitshi inkulu kakhulu, kwaye oku kugxininiswa ngakumbi kuba inezibane ezaneleyo zendalo kwaye isebenzisa ukukhanya okugqityiweyo ezindongeni nasemigangatho yayo. Iikhabhathi zekhitshi nangona kunjalo, zibonelela ngumahluko okhanyayo kwimibala ekhanyayo njengoko isebenzisa ukugqiba kwe-walnut emnyama kwiikhabhathi zayo kwaye iyiphakamisa ngee-greyite counters. Ukulinganisela kwemibala ekhanyayo kunye nemnyama kudala isibheno esimnandi, kwaye inika uyilo lwekhitshi oluhle ngokwendalo lweekhitshi zesiko.
Eli khitshi linobunewunewu lidlala ngokudityaniswa kokukhanya kunye nokumnyama kwiikhabhathi zaso zasekhitshini. Uyakuqaphela ukuba ikhitshi eliphambili lisebenzisa iingcango eziqinileyo ezifakwe iplanga kwaye liyidibanisa nezinto zokubala zemabhile kunye nomqolo obuyela umva, ngelixa ikhabinethi yesiqithi sekhitshi ipeyintwe ngombala omhlophe omhlophe. Indawo eseleyo isebenzisa imibala engathathi hlangothi -iindonga ze-beige kunye nemigangatho yamatye e-cream, eyenza ukuba ibelula emehlweni kwaye ibe lixesha elihle.
Ukufakwa okuphezulu kwangoko kunika ukuziva okungazenzisiyo kuyo nayiphi na indawo kwaye kuyenze ibonakale iphangalele ngakumbi. Kulo mzekelo, ukuphakama kwesilingi kuyagxininiswa njengoko iikhabhathi zekhitshi zingafikeleli kubude obuphezulu besilingi. Iindonga ezenziwe nge-cream zisebenza njengemvelaphi yokukhanya eqinisekileyo kwiikhabhathi zekhitshi ze-Oak kunye nokudibanisa iithayile ezinemibala e-cream kunye nezinto zokubala zegranite. Iinkcukacha zakudala zeekhabhathi zasekhitshini ziqhubela phambili kwisibheno sasebukhosini kunye nomgangatho omiselweyo.
Eli khitshi lidibanisa iithoni ezimbini zomthi omnyama ukuze lenze uyilo olumnandi lwekhitshi. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zingumthi oqinileyo kwithoni entle yegold walnut kwaye ifakwe igranite enombala wekhrimu, kodwa ikhabinethi engaphantsi koluhlu nangaphezulu koluhlu isebenzisa umthi omnyama, onabala ngombala omnyama we-mahogany, ngokwahlukileyo kwiikhabhathi ezikhanyayo zelnut . Ikhawuntari enkulu yesiqithi isebenzisa ibala elifanayo elimnyama mahogany ngaphezulu kwayo elinceda ukuvelisa ipateni yekhawuntara yegranite. Iikhikhini zomthi ezimnyama ezidlala ngeetoni ezahlukeneyo zomthi zinokufezekisa umahluko onomdla kunye noyilo olwahlukileyo.
Uyilo lwekhitshi lubonisa ubuhle beekhitshi zemveli ngomthi wazo onesibindi ngokudityaniswa komthi. Zonke iikhabhathi zasekhitshini, kubandakanya nesiqithi sayo esikhulu sasekhitshini, zenziwe ngomthi wom-oki oqinileyo. Oku kusekwe ngokuchasene nemigangatho yeteak eqinileyo kwaye kudityaniswe ngakumbi nezitulo ezenziwe ngomthi-yonke indibaniselwano yomthi eyenza ukuba ibonakale inzima, inyanzelisa, kodwa igcine isibheno sobukhosi kunye nesodidi.
Isicwangciso esivulekileyo sanamhlanje sinceda eli khitshi ukuba likhangeleke liqaqambe kwaye limeme ngaphandle komthi omnyama osetyenzisiweyo kwiikhabhathi zawo. Iikhabhathi zenziwe zakudala zoyilo lwekhabhinethi yasekhitshini kwaye iqhubela phambili ukubonakala kwayo kweklasikhi ngeengcango ezifakwe iipanele kunye nokugqitywa kweMahogany ebomvu. Kodwa ukuchukumisa kobuhle banamhlanje kuyongeza kubuhle bayo njenge quartztite emhlophe isetyenziselwa izixhobo zayo zasekhitshini endaweni yegranite okanye imarmore emhlophe, ukuyinika ukukhanya kunye nokuziva okwangoku. Imigangatho yokukhanya yeplanga yeplanga ikwanceda ukukhanyisa indawo kunye nokucima umbala omnyama wekhabhathi zasekhitshini.
Izithuba zekhitshi eziqaqambileyo-ezinokukhanya okwaneleyo kwendalo, imigangatho ekhanyayo kunye neendonga- zikwenza ukuba uzame ukusebenzisa ukugqitywa komthi omnyama kwiikhabhathi zakho zasekhitshini ngaphandle koloyiko lokwenza ukuba ikhitshi lakho libonakale limnyama kakhulu kwaye linamandla. Uyilo lwekhitshi ngomnye wale mizekelo njengoko ubona indlela imigangatho yelitye enombala okhanyayo kunye nemigangatho emthubi etyheli ehlala kunye nokulinganisa iithoni ezibomvu ezimnyama eziziswe ziikhabhathi zekhitshi zomthi omnyama. Imvelaphi ekhaphukhaphu inceda ithoni phantsi kokubonakala okumangalisayo kweekhabhathi zasekhitshini, kwaye oku kuyancediswa kukusetyenziswa kweekharektha zeetranite zekhrim kunye ne-backsplash.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje olusebenzisa iikhabhathi zemodyuli ezinobugcisa obuncinci. Iindonga zikumbala ocacileyo omhlophe, zikunika imvelaphi entle yokungathathi hlangothi, kwaye unceda ii-laminates ezimnyama ze-mahogany ezisetyenziswe kwiikhabhathi ziphuma ngakumbi. Ngelixa uninzi lweekhabhathi zekhitshi zinamathiselwe kwithoni efanayo ye-mahogany, ezinye iindawo zeekhabhathi ezingaphezulu kunye neekhabhathi ezininzi, kubandakanya nesiqithi sekhitshi, endaweni yoko zazilaminishwe ngombala omhlophe ocacileyo, zinceda ukukhupha ikhofi ebomvu eqinileyo kunye nokubuyela umva.
Uyilo lwekhitshi luhlala luhambelana nokukhetha kwalo ukugqitywa kweenkuni, ukuhlala uthembekile kwithoni ye-oki yendalo yemigangatho kunye nophahla lweenkuni, ukuyazisa kwiikhabhathi zasekhitshini ezisetyenzisiweyo kwaye ziyithelekisa nayo yonke indawo. Ukuyigcina ijongeke iyadika okanye imnyama, iphepha lodonga elimhlophe elalisenziwa ngobunkunkqele eludongeni lasetyenziswa kwiibhokisi ezimnyama zom-oki. Ikwanesiqithi esinendawo yokuhlala eyakhelwe-ngaphakathi kwi-banquette egqityiweyo ngombala we-oatmeal kwaye ifakwe imabhile, enceda ukulinganisela imibala emnyama ekhoyo ubukhulu besithuba.
Ikhitshi elingentla lithanda ukugxininisa imijelo yendalo kunye nemingxunya yemithi yayo kwaye uyihlobise ngokulula ukuyikhupha ngakumbi, inika eli khitshi ubume bendalo obumnandi kunye ne-orange tinge efudumeleyo ehambelana kakuhle namatye aphekiweyo etyheli. Uyilo lwendabuko lwekhitshi luyinto eyahlukileyo kulwakhiwo lwangoku olubonakalayo kuyilo lwalo oluphezulu kunye nokugqitywa kodonga okulula.
Eli khitshi lanamhlanje lisebenzisa iinkuni zendalo eziqinileyo endaweni yokusebenzisa iiplanga ezinamathambo ukwenza oku kujongeka, ukunika isibheno sendalo ngakumbi. Ngelixa iikhabhathi zasekhitshini zicacile kwaye zigcinwe zikhululekile kwimizobo kunye nokunye ukuhonjiswa, ukusetyenziswa kweenkuni eziqinileyo kunika ukufudumala, ubume kunye nobuntu, nanjengoko icwangcisiwe ngokuchasene neentsimbi ezingenanto ezingenanto kunye nomqolo ongasemva. Kukwakho nesiqithi esikhulu sekhitshi esidibanisa ububanzi beekhabhathi eziphambili zekhitshi kwaye sifakwe imabhile emhlophe ukongeza ukugqitywa kweklasikhi kwindawo yanamhlanje yekhitshi
Ngaphandle kokuthandwa koyilo lwala maxesha kunye nolwakhiwo, isibheno sekhitshi yakudala sisekhona kwaye singqina ngobuhle obungapheliyo. Le mizekelo ibonisa indlela onokuthi udibanise ngokulula ubugcisa banamhlanje kunye noyilo lwekhitshi lobugcisa. Kule khitshi, iingcango ezenziwe ngeplanga ezenziwe lula zazisetyenziselwa zonke iikhabhathi zasekhitshini kwaye zigqityiwe kumnyama wengue, ukuyinika umahluko omnandi kwiindonga ezikhanyayo ezingwevu, kunye nesibheno esihle. Oku kunceda ukuvelisa ubuhle bendalo betafile yamatye engwevu esetyenzisiweyo, ukudala ulungelelwaniso olukholisayo lwemibala kunye noburhabaxa.
Ukuba iphangalele, eli khitshi lizama ngenkalipho ukudibanisa iithoni / ukugqiba kweenkuni. Imigangatho sele inesibindi ngokwawo - yimigangatho eqinileyo yomthi we-teak ngesandi esiphantsi esi-orenji, esihambelana kakuhle nepeyinti emthubi eludongeni. Iikhabhathi zasekhitshini zikwasebenzisa ibala lokugqibela kwisiseko salo somthi ngesandi esiphantsi seorenji, kodwa ityhila umphezulu ogudileyo ngokuchaseneyo neeplanga zomthi ezisezantsi, kwaye ikwanesiqithi esikhulu sekhitshi nesiphelo esikhethekileyo esidala, esidibanisa ubume ngakumbi. kweli khitshi lilula.
Isibheno esihle sekhabhathi zasekhitshini laseMahogany esibonakala ngathi sihlala ixesha elide, kwaye kulo mzekelo, uya kubona ukuba ikhitshi elinezinto zakudala likwazi njani ukubonakala lihlaziyiwe ngaphandle kokukhuthaza kwendabuko. Iikhabhathi zisebenzisa iimodyuli, kodwa zisebenzisa umbala obomvu weMahogany ukuyinika isibheno esihle ngakumbi. Oku kubhangqiwe ngenxa yokungabikho kwegalakisi yomthala, indibaniselwano yamehlo elula, kunye neethayile ezibuyela umva ezimhlophe. Izibane zala maxesha kunye nezixhobo nazo zisetyenzisiwe, ukunceda eli khitshi ukuba liphumeze olo jongelelwano lwekhitshi yemveli.
Umthunzi okhanyayo wombala omdaka osetyenziselwa ukupeyinta iindonga unceda ukuthambisa konke ukubonakala kwale khitshi, kodwa ikwanceda ukugxininisa ubuhle beekhabhathi zaso zasekhitshini ezinesiphelo esihle se-walnut. Uyakuphinda uqaphele indibaniselwano entle yeethayile zodongwe ezimdaka ngeetayile ze-mosaic ezisetyenziselwa ukuhombisa umva wekhitshi. Ikhawuntari enkulu yesiqithi inika isibheno esihlaziyayo kumbala omdaka ofudumeleyo wekhitshi njengoko inegrey egqityiweyo ngaphezulu kwesiseko somthi wendalo, ukwazisa ubume obahlukeneyo ekhitshini.
Ngaphandle kwesitayile esiqhelekileyo sekhabhathi zasekhitshini, ukugqitywa kokusebenzisa kwayo ngokuqinisekileyo kukuhlaziya okwangoku kwimbonakalo yekhitshi yakudala. Endaweni yokugqitywa kweenkuni zendalo, eli khitshi livula ukupeyinta iikhabhathi ezifakwe kumbala omnyama ongwevu, ukugcina isibheno esihle seekhitshi zakudala, ngelixa lisinika isibheno sanamhlanje. Oku kudityaniswe nezixhobo zokukhanyisa i-retro, ukukhanya okufudumeleyo kwekhabhinethi kunye nokusetyenziswa okungagungqiyo kwemabhile kwizibali zayo nakwi-backsplash.
Umthi wendalo ngamanye amaxesha unceda ukuzisa ukufudumala, ukuziva homier kuyilo lwala maxesha, kwaye njengoko kubonisiwe kulo mzekelo, ngaphandle koyilo lwangoku, iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa ukugqitywa kweenkuni zendalo ukuze zinike ukukhanya kwendalo. Imithi yendalo esetyenzisiweyo yayihlatywe isanti, ipolishiwe kwaye yahlanjwa ngethoni entle ebomvu ye-mahogany, enika ubomi kumphezulu ongwevu weendonga kunye nemigangatho.
(Attribution Flickr # 6)
Umgangatho oqinileyo weMahogany kunye nepeyinti ebomvu ebomvu yale khitshi ibeka imvelaphi efudumeleyo kunye nobumnyama ukuba isebenze kuyo, kodwa ukukhanya okwaneleyo kwendalo kunceda ukunciphisa ukuthambekela okumnyama ekukhetheni kwayo ukugqiba. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa i-walnut eqinileyo entle, ngelixa isiqithi esikhulu sekhitshi sinepeyinti emnyama esekwe kugqatso lwakudala, iveza isiseko sayo somthi wendalo. Njengokubuyisa imibala emnyama, i-countertop esetyenzisiweyo inesiseko esingwevu esikhanyayo, esigcwalisa iithayile ezingwevu ezisetyenziswe kwi-backsplash.
Le yikhitshi yemveli elula enezinto zemveli kwaye igqityiwe, kodwa igcina isibheno esihle kunye nenhle. Umthi osetyenzisiweyo kwiikhabhathi yiMahogany eqinileyo, enika isandi esiphantsi esibomvu esihle. I-countertop isebenzisa i-100 × 100 iileyili zeceramic ezazisetyenziswa rhoqo kwiikhikhini ezindala kunye ne-backsplash nayo iileyili zeceramic kunye nephethini yokuluka. Kwisiqithi sasekhitshini, nangona kunjalo, sisebenzisa igreyite engwevu endaweni yeethayile zeceramic kodwa sisebenzisa isiseko sekhabhathi yewalnut engathathi hlangothi. Ukuqhubela phambili ukubonakala kweklasikhi, uya kubona iipani zixhonywe ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi kwikhandlela yentsimbi ngaphezulu.
(Attribution Flickr # 7)
Iikhitshi zesiko zinobuhle obungapheliyo kunye nobuhle kuyo, kwaye ngamanye amaxesha, ifuna ukuphuculwa nje kancinci ukuyinika inkangeleko ehlaziyiweyo. Njengakulo mzekelo, zonke iikhabhathi zekhitshi zomthi oqinileyo kwaye zinehlobo lokugqibela / lokugqibela. Kwaye zidityaniswe nezinto zokubala zegranite yendalo kunye neetiles zokubuyela umva ngokufanayo. Ukukhanya kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zale mihla, nangona kunjalo, kuhlaziya oku kuyilwa kweklasikhi kancinci. Uya kubona ukuba izibane zangaphantsi kwekhabinethi zidityanisiwe njani, kunye nokukhanya kwesandi ngaphezulu kweekhabhathi ezingaphezulu, kuthumela ukuhlanjwa okufudumeleyo kombala kwisilingi emhlophe.
Iikhikhini zomthi ezimnyama zisebenza kakuhle xa zidityaniswe nesitayile sangoku. Ikhitshi lihlala kwigumbi elahlukileyo elinemiqobo yesiqhelo yanamhlanje- imigangatho emhlophe ethanjisiweyo kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe. Ukugqitywa kokuyilwa okunomdla kuya kufunyanwa eluphahleni ngesibhakabhaka, njengoko inxitywe ngamaplanga e-teak. Ukongeza kwidrama yemibala eyahlukileyo, indawo yonke yasekhitshini isebenzisa iikhabhathi ezigqityiweyo ezifakwe izinto zokubala ezimnyama ezomeleleyo ezenza ukuba i-cobalt blue graphicote backsplash ime ngaphandle.
(Attribution Flickr # 8)
Iithoni zomhlaba kunye nemibala efudumeleyo ihlala ikhona kolu loyilo lwekhitshi njengoko uza kuyibona le nto kwindawo yonke. Ukusuka kwiithayile ezisetyenzisiweyo, ekukhanyeni kwe-beige rag-rolls egqityiweyo iindonga nkqu nakwiikhabhathi zayo zasekhitshini. Iikhabhathi eziphambili zezomthi oqinileyo ekugqityweni kwe-oki yegolide, kuyinika ukujonga okufudumeleyo kwendalo, ngelixa isiqithi esikhulu siqesha kwipeyinti emnyama emnyama, sityhila amabala ngombala othile wemithi yendalo kwaye siyinika ukujonga okudala / okudala. Iitoni ezishushu zomhlaba zikwakhona kwiikhawuntara ze-granite ze-beige kunye neethayile zokwenza i-cream backsplash tiles, kunye nezihlalo ezikhawulezayo zekhawuntara yebar.
(Attribution Flickr # 9) Ibekwe kwindawo evalelweyo, olu luyilo lwekhitshi olumnyama lusebenzisa isithuba esilinganiselweyo ngokufanelekileyo, kuba nakho ukusebenzisa zombini iindonga eziphambili zeekhawuntari zasekhitshini kwaye bakwazi nokulingana nekhawuntara yesiqithi. Yintoni enomdla ngakumbi kukusetyenziswa kweenkuni ezinamabala amdaka, kukunika umbala omnyama kakhulu kwaye ukhaliphile wekhabhathi zasekhitshini ezilinganise kakuhle ngemigangatho emhlophe enethayile, izixhobo zokubala ze-beige granite kunye neethayile zekhrim ezisetyenziswe kwi-backsplash.
(1) SherwoodRealEstate ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(Mbini) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(3) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(4) SherwoodRealEstate ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(5) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(6) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(7) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(8) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(9) Okchomeseller ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
kungekudala ukuthumela iimemo zomtshato
imilenze ebanzi yomtshato
Izimvo zesipho seminyaka engama-20 sisibini